Ferrari iyo Abaal marinta Abaalmarinta Guusha ee abaalmarinta Zow Fair (Sawirka Sawirka) | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSAWIRADAFerrari iyo Tiffany ee Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta ee Zow Fair (Sawirka Sawirka)
25 / 03 / 2014 SAWIRADA, GUUD, Headline
Nowgale mashruuc ah oo ka mid ah Naqshadeynta Zow Fair, Ferrari iyo Tiffany oo ah Award Winner: Ferrari iyo Tiffany: ZOW Fair, oo ah naqshadaha, naqshadaha gudaha iyo naqshadeeyayaasha ayaa la kulmaya, samaynta xiriirrada ganacsiga dibedda iyo soo bandhigida casriyeynta ugu dambeysa ee qaybta, waxay soo jiidatay barnaamijka "ZOW Essentials Seminar Program" maalintii labaad. . Massimo Iosa Ghini, Designer Tiyaatarka iyo Naqshad leh abaalmarinta Red Dot Design Award, Designer Yılmaz Zenger, Prof.Dr. Dr. Celal Abdi Guzer iyo wakiilka CSIL Sara Colautti ayaa siiyay macluumaad qiimo leh daawadayaasha.
Qorshaha talyaaniga iyo naqshadeeye Massimo Iosa GHINI, oo taabanaya saamaynta dhaqanka ee naqshadeynta iyo ka shaqeynta alaabta warshadaha, naqshadaynta iyo naqshadeynta mashruuca; "Naqshad waa in la sifeeyo sirta aadanaha oo ah qalab, ugu dambeyntii si loo soo saaro alaab macquul ah. Aad bay muhiim u tahay in la isticmaalo tiknoolajiyada marka la samaynayo dhaqanka iyo naqshadeynta. Dabcan, keligaa ma aha mid ku filan, kaliya mid ka mid ah gundhigyada. Tiknoolajigu waa inuu u shaqeeyaa bini-aadannimada, u adeega bani-aadamka, iyo marka aynu eegno naqshadda, qolka waa in loo sameeyaa bini-aadannimada. Faa'iidada aan dadka siinno waa inaysan aheyn kuwo farsamo, waa inay wax ka qabtaan muusikada dadka, waa in la abuuro faa'iido falsafadeed. Marka la soo saarayo badeecada, mid waa inuu ka fekero sida qof kale u isticmaali doono naqshadeynta iyo ka fekeraya badeecada. Waa inaad ku raaxaysataa oo aad ku faraxsanaataa marka la soo saarayo sheyga. Waxyaabo kasta waa in lagu dhisaa fikrad. Waxaan abuuraa alaabo ku xiran dhaqanka, halkaas oo casriga iyo dhaqanka ay isku dhexdhexaadiyaan. Dabcan, drier, alaabta waxoogaa saboolka ah waa in la sameeyaa, waa in la helaa badeecooyin hore iyo kuwa qadiimiga ah. Teknoolajiyada iyo naqshadeynta had iyo jeer ayaa loo isticmaalay alaabtan. Tusaale ahaan, baabuurta Wosvagen ayaa la cusbooneysiiyay maanta. Waxaan isla sameynay jikada. Ladaan waxaan u diyaarinay jikad aad u heer sare ah, jikada Britian-style, taas oo ah dhaqanka ka dib qaabka isbedelka, laakiin waa mid casri ah. "
AIR CABIRI Nidaamyada Cudurka
Ghini wuxuu xusay in uu isticmaalo waxyaabaha dabiiciga ah ee naqshadaha jikada ee sanadihii la soo dhaafay. "Waxaan soo saarnay badeecooyin waara oo dhammaystiran, xitaa haddii aan lahayn jilicsanaan. Waxaan leenahay qaabab badan oo ku saleysan dabeecadda. Waxaan leenahay mashaariicda aan jecelnahay inaan isticmaalo qoryo iyo dhagax sida qalabka. Waxaan isticmaalnaa teknoolajiyada tamarta guryaha. Waxaan u adeegsaneynaa nidaamyada kalluumeysiga si loo nadiifiyo hawada. Waxaanu dhisnaa magaalooyin caqli badan oo ku yaal Rome. Waxaan naqshadeynaa derbiyada dhirta leh dhirta. Waaridnimadu waxay aad muhiim ugu tahay naqshadeynta. Mashruuc kale oo aan ku sameeyey mawduucan waa duruuf taas oo awood u siinaysa dhirta in la waraabiyo biyaha roobka. Waxaan sidoo kale isticmaalnay nidaamyada kalluumeysiga ee tareenada. Intaa waxaa dheer, waxaanu abuurnay dhismayaal siiya dabka iyo qaboojinta dabiiciga ah. "
KA-FIIRIDDA FAA'IIDOOYINKA MUSQUSHA AH MUHIIM AH
Inaad sheegto inuu isagu isu keeno waxyaabaha faa'iidada u leh; '' Tusaale ahaan, waxaan sawirrada muraayadda ku siinnaa musqulaha musqulaha, waxaanu siinnaa fursad fudud oo loogu talagalay musqusha. Ugu dambeyntii, wejiga iftiinka ayaa sidoo kale muhiim u ah naqshadaha, taas oo ii saameysa. Hadda waxaan ku ciyaari karnaa iftiin leh horumarinta farsamada casriga ah. Naqshadaha dhismaha waxaa lagu samayn karaa iftiin iyagoo tixgelinaya dhammaan faahfaahinta deegaanka
XAQIIQIMADA, WALAXAADDA IYO DHACDOOYINKA DIFAACIDDA DESIGN
Ghini oo ka hadlaya nooca cabitaanka; "Biyaha soodhaha ayaa haya oo xajiya foomamka mudo dheer. Tixgelinta nolosheena, waxaan leenahay nolol dareere ah. Isbedelka xasilloonida bulshada casriga ah iyo xawaaraha xogta macluumaadka waxay awood u siineysaa inaan qiimeyno deegaannada si aad ah iyo si firfircoon. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u baahanahay inaan ka fikirno isbedel dhaqameed. Waxaan u isticmaalay fikradaha ah hufnaanta, socodka iyo joogteynta ee naqshadeyga For Museum of Ferrari Maserati iyo shirkadaha IBM. Waxaan sidoo kale ku soo biiray alaabta dhaqameedyada iyo waxyaabaha casriga ah ee hudheelada mashaariic kala duwan. Waxaan sidoo kale diirada saarnay qaababka caanka ah ee ku yaala dukaamada Ferrari iyo Tiffany. Dukaanka Kiko, oo iibiya alaabada la isku qurxiyo, waxaan u kala hormarineynaa xariiq iyo fiiq. Nidaamkayaga ugu weyn ee naqshadeynta dukaamada Kiko wuxuu ahaa muujinta alaabta. Naqshadahan waxaa lagu soo bandhigay shirkado badan oo isku qurxiyo. "
30 MACLUUMAADKA SIYAASADEEDA SIDA LAGU HESHO YURUB
Sara COLAUTTI; X Xitaa sida 30 ee shirkadaha ku yaal warshadaha alaabta guriga waxay leeyihiin tas-hiilaadyo dalal kala duwan. Wadamada soo koraya waxay ku maalgelinayaan xarumo cusub iyo R & D kala duwanaansho. 10 waxay ku bixisaa alaabta dheeraadka ah ee 5 sanad ka hor. Wadamada horumaray, sida wadamada Asia iyo Pacific, waxay leeyihiin qayb muhiim ah oo kharashka ku baxa. Kaliya Yurubta Galbeed waxay quseysaa 32 ee kharashka. Dhibaatada ka dib, 2 waxay hoos u dhacday sannadihii la soo dhaafay. Laakiin waxaan rajeyneynaa horumarinta 3 sanadaha soo socda. Waxaan sidoo kale u maleyneynaa in horumarinta Galbeedka Yurub ay hoos u dhacayso. Sanadihii ugu dambeeyay ee 10, waxaynu arkaynaa in ganacsiga alaabtu uu kasbaday wax ka badan wax soo saarka alaabta guriga. Dhibaatada kaddib, qarashka qofkiiba ayaa kordhay. Waxaan ognahay in wadamada dakhligoodu hooseeyo ay isticmaalaan suuqyo xiran. Maanta, dalal badan, gaar ahaan Isbaanishku, waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo suuqyo furan.
Sannadkii ugu dambeeyay 10, waaxdu waxay samaysay horumar aad u degdeg ah. Dhaqaalaha Turki wuxuu leeyahay wax badan oo la sameeyo tan. In dhibaatada 2009 sii xataa wax soo saarka alaabta guriga ee Turkey. 10 ayaa kor u kacday boqolkiiba, taas oo ah koritaan halis ah. Saadaasha kobaca ee xilligaani waxay ahaayeen 4.7 aduunka. Soosaarka shakhsi ahaaneed wuxuu ahaa mid aad waxtar u leh koritaanka. Dhibaatooyinka iyo baahida dadka Turkiga way isbedelayaan. Isbedelkan ayaa sidoo kale saameyn toos ah u leh kobaca. Turkey waxaa lagu qoro koritaanka weyn oo yar iyo dakhliga dhexe-dal. 30 boqolkiiba oo Europe ah 34 boqolkiiba dhoofisa Bariga Dhexe. Turkey waa mid aad u wanaagsan marka la eego oo qoryo ku salaysan darfaha soo saaraha. Isla mar ahaantaana ah dhoofinta aad u wanaagsan in arrintan la xiriira, 1 million mitir cubic of darfaha soo saaray dalka Turkiga sanad walba. Tani waxay sidoo kale muujinaysaa in ku dhowaad dhammaan saaray guddi alwaax Turkey loo isticmaalo dunida. "Waxa uu sheegay.
GEOGRAPHY TALO KA HELI KARO DIYAARIYADAHA BULSHADA
Yilmaz ZENGER; "Istanbul waa magaalo oo leh waxyaabo badan oo dhaqameed hore. Uma baahnid inaad aado da 'wayn; Byzantine, urub, dhaqamada kala duwan ka fekerin waxa ka mid ah tusaale aad u muhiim ah oo ka mid ah Jamhuuriyadda Turkey. Qoraalkan, naqshada waa qalab aad u culus. Anigu waxaan aad ugu dhawahay counterculture iyo naqshadeynta. Sidii aan hore u soo sheegnay, Istanbul waa magaalo leh dhaqamo badan oo madani ah. Saameynta tani waxay ku salaysan tahay naqshadeynta looma diidi karo. "
Professor Dr. Celal Abdi GÜZER; Guzer, oo bixiyay macluumaad qiimo leh oo ku saabsan naqshadeynta iyo dhismaha ee naqshadiisii ​​oo uu cinwaankiisu ahaa "Naqshad ahaan mawduuc dhaqameed dhaqan, gaar ahaan, waxaa lagu dhegeystay xiisaha gaar ahaan ardayda dhismaha. Fall, "Cuntooyinka ugu caansan waa qaraabo. Isticmaalayaasha ma jeclaan karaan badeecadaha dhajiya sida, ama ka baxsan. Sidaas darteed sanadaha 60 waxay u fiicnayeen labada dhinac. Kala duwan ayaa yaraa. Hadda, xitaa hadda cadaalad ZOW, ​​waxaa jira kumanaan noocyo ah. '' Ayuu yiri.
Danta xiisaha leh ee TÜDEMSAŞ ee shirkadaha gudaha iyo dibaddaba (Sawir Sawir)
Tababaraha Ferrari wuxuu galay tareen sarre leh
Danta Muhiimka ah ee Gaadiidka iyo Korontada ee Bandhiga Caalamiga Ah
Tram Wagons ee Izmir sida Ferrari
InnoTrans Fair xiiso xooggan oo ka socda dalka Turkiga
Dogan, Kahramanmaras dad ayaa la kulmi doona xawaaraha tareenka xawaaraha